News – Page 1019 – Puntland Voice
Markab shacabka reer Falastiin Hilib Gasacadeysdan u siday oo Maanta si dirqi ah kaga baxsaday Kooxaha Burcad Badeeda.
Mid ka mid ah Maraakiib hilib gasacadeysan u siday Falastiiniyiinta ku go’doonsan dhulka Gaza ayaa waxaa uu Maanta si dirqi ah kaga badbaaday afduub ay la damacsanaayeen kooxaha Soomaaliyeed ee Burcad badeeda ah. Sedex Markaboo hilibkaani siday ayaa ka soo […]
Saraakiil u kala hadashay Dowlada KMG iyo Ururka Xisbul Islaamii oo Guulo ka wada sheegtay Dagaalkii Maanta B/weyne ka dhacay.
B/weyne (AB):-Kadib dagaalo qaraar oo Maanta ka dhacay Duleedka Magaalada B/weyne kaasoo u dhexeeyay Ciidamo kala tabacsan Dowlada MG iyo Ururka Xisbul Islaamii ayaa waxaa guulo kala duwan ka sheegtay Saraakiil labada dhinac u kala hadashay. Axmed Cusmaan Cabdule Inji […]
Wasaarada Lacagta Dowlada KMG oo Maanta soo bandhigtay lacaha ay qabatay sanadkii dhamaaday iyo midka hada socda.
Muqdisho (AB):-Wasiirka Lacagta taagta daran ee Madaxweyne Shariif hogaamiyo ayaa maanta shir jaraa’id uu ku qabtay Muqdisho waxaa uu ku soo bandhigay lacaga ama miisaaniyada Dowlada ay ka qabatay ilaha dhaqaalaha sanadkii tagay iyo sanadaai bartamaha maraya. C/raxmaan Yariisow waxaa […]
Qaar ka mid ah Shirkadaha Xawilaadaha ay Sooomaalidu ku lahaayeen Dalka Suudaan oo albaabada la isugu laabay.
Khartum (AB):-Wararka ka imaanaya Magaalada Qartuum ee Dalka Suudaan ayaa sheegaya in ciidamada Dalkaasi ay maanta albaabada isugu laabeen Qaar ka mid ah Xafiisyada Shirkadaha Xawilaadaha Soomaalidu ku lahaayeen Xarunta Suudaan. Sababta loo xiray Shirkadaha Xawilaadaha ayay ku sheegeen Boliiska […]
WAR DEG DEG AH: Macalin Xaashi Maxamed Faarax oo goor dhow Hanjabaad u jeediyay dhamaan shaqaalaha TV-ga Universal
WAR DEG DEG AH: Macalin Xaashi Maxamed Faarax oo goor dhow Hanjabaad u jeediyay dhamaan shaqaalaha TV-ga Universal Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ee Ururka Xisbul Islaamii ayaa goor dhow oo barqanimadaan ah shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana uu kaga […]
« Previous 1 … 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 Next »